Global Voices teny Malagasy » Haiti: Herintaona lasa izay…Tsaroantsika tsara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Febroary 2011 13:09 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Erikah
Sokajy: Karaiba, Haiti, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Politika, Tantara, Tontolo_iainana, Voina, Vonjy Voina
Herintaona  androany (12 Janoary 2011) ny nitrangan’ ilay horohorontany tao Haiti . Mahatsiaro izany ny mpitoraka bilaogy Haitiana…
Manoratra ny vohikala Haitiana The Livesay  :
Tamin'ny faha 1/12/2010 tamin'ny 4:53 hariva dia niova tanteraka ny tontolo rehetra manodidina an'i Haiti.
Na dia teo aza ireo voina sy ny famoizana dia mitraka ny fo amam-panahin'ny vahoaka,
Androany dia nitsahatra ny firenena iray manontolo mba hahatsiaro ireo olona nafoiny. Mangataka aminareo mba hivavaka ho azy ireo ary hiara-mivavaka amin'izy ireo.
Nanao tamberina ny lahatsoratra rehetra voasoratra taoriana kelin'ny andro nitrangan'io voina io ihany koa ny bilaogy, ka nanampy hoe:
Tsy nisy herinandro tena tsaroanay fatratra nandritry ny 38 taona niainanay ka hoe mazava tsara tao anatin'ny tsiaronay raha tsy ity herinandro ity izay fankalazana ny zava-niseho tamin'ny herintaona lasa. Tena sarotra ny maminavina sy manaiky ny havesatry ny fijaliana nianjady tamin'ireo ora sy andro maro taorian'ny nitrangan'io horohorontany io.
Fasana tao amin'ny tanan-dehibe Pétion, sary nalain'ny caribbeanfreephoto, nahazoan-dalana Creative Commons Licence.
Namoaka sary anankiray ny bilaogin'i Karlito ary “mety efa hitanareo io sary io izay tsara tarehy na aiza na aiza eto amin'ny tambajotra-tsosialy (Facebook, Twitter, BBm) ankehitriny”, nanazava ny tao anatin'io bilaogy io:
Ny alina lasa teo efa harivariva ihany, raha nieritreritra ny fomba hanamarihana ny fahatsiarovana ny herintaona nisian'ilay horohorontany izay nandrava zavatra maro tao Haiti aho, dia tonga tato an-tsaiko fa tsy dia mila manao zavatra goavam-be, ny zavatra ilaiko fotsiny dia ny miaina, ka izany no namoronako ity sarikely ity hanamarihana izany.
Ny ahatongavantsika eto dia tsy hoe hitantara fotsiny, io tantara io sy ny tantarantsika mba ho ampatsiahivantsika ny zanatsika sy ny zafikelintsika fa mba hanampy azy ireo hanana ho avy mamirapiratra ary tsy ao anatin'ny ahiahy. Ny ilaintsika dia ny miaina isan'andro mba ahafahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra isaky ny dingana alehantsika eo amin'ny fiainana noho ireo fahasoavana nomeny antsika isan'andro nanomboka tamin'io andro io. Tsy misy zava-manan-danja indrindra noho io fanomezana io dia ny fiainana izany.
Eto  dia namoaka ny hevitry ny Haitiana iray mpikambana ao anatin'ny zanaka ampielezana mikasika ny fizarazarana io bilaogy io :
Nandiso fanantenana avokoa ireo mpitantara ireo fa ny hany mba nitantara ny zavatra tena nitranga mikasika io horohorontany io dia ireo olon'ny Jesoa touye tout moun nan peyim la.’ TOHINA AHO…..
Nikiakiaka aho tao an-trano ary nihazakazaka ny nenitoako nijery izay nanjo ahy, notantaraiko azy avy eo ilay voina, tsy tadidiko tsara ny filahatry ny zavatra nitranga rehetra fa ny tadidiko dia izaho niezaka niantso ny Ray aman-dReniko tao Haiti nefa tsy nahenoako valiny, namadika fahitalavitra aho ary azoko antoka fa tao no nahitako an'i Carel  nampita ny zava-niseho miaraka amin'ny ranomaso, tena nahaontsa ahy ny nihaino ny feony izay kivy dia kivy tokoa.
2 herinandro izay , nody tany an-trano aho nijery izay zavatra sisa tavela tao amin'ny tananako sady haka rivotra ihany koa , fakan-drivotra izay sady tsy ahazoako tso-drano no tsy mahafaly ahy. Tsy afaka nankalaza izany izahay Haitiana nohon'ny havitsian'ny isanay izay navelan'Ingahy horohorontany tao Haiti. Ny zavatra hitako teny amin'ny mason'ny rahalahiko raha nankany Port-au-Prince aho dia fahadisoam-panantenana mifangaro tahotra, fijaliana, fihafiana, alahelo, fankahalana, tsy firaharahiana fa indrindra indrindra ny fanantenana ny hisian'ny andro mihiratra…. Herintaona taty aoriana, mbola maro foana ireo fatin'entana miparitaka, mbola mipetraka anaty tranolay any amin'ny faritra natao ho an'ny mpitsoa-ponenana / ireo niharam-boina ireo, mbola mangalatra foana ny olona, dia mbola misy mpanolana foana ny vehivavy, tsy mitsahatra mihitsy ny herisetra ary mbola mahafaty olona hatrany ny aretina kolera…. mety hoe vahiny aho ka tsy nahita fiovana mihitsy , fa raha mampitaha ny sary voaraiko tamin'ny herintaona aho dia izay ny zavatra hitako, ankoatran'ireo fatin'olona sy fatin'entana naparitaka , ny ambiny dia mitovy tamin'ny taloha ihany……MBOLA TSY NATOMBOKA NY ASA AMAN'ANDRAIKITRA LEHIBE….
Lapam-pirenena, sary nalain'ny caribbeanfreephoto, nahazoan-dalana Creative Commons Licence.
Tao amin'ny Twitter, ireo tenifototra miresaka momba ny herintaona nitsingerenan'ny horohorontany dia #remember #Haiti  – ary ny olona tao amin'ny Tweet dia nampiasa io sehatra fitorahana bilaogy kiritika io ho hanaovany izany monja:
@SophieChavanel: Mitangorona eo anoloan'ny Lapam-pirenena ny vahoaka #haiti #remember http://yfrog.com/gzzfjmj 
@SophieChavanel: Mitangorona eny rehetra eny tao amin'ny PAP ny vahoaka mba hankalazàna io tsingerintaona izay mampalahelo io #haiti #remember http://yfrog.com/h5asqevj 
@JAMGAL2010: #herintaona izao…. nisy voina nahatsiravina nandona ny fiainan'ny vahoaka tao #Haiti #remember http://bit.ly/bvYqP8 
@chadcat: ho an'ireo izay namoy ny ainy, ho an'ireo izay voadona mafy tamin'izany ka hatramin'izao, ary ho an'ireo izay nanome fanampiana #remember #Haiti 
Fasana tao amin'ny tanànan'ny Pétion, sary nalain'ny caribbeanfreephoto, nahazoan-dàlana Creative Commons Licence.
Mbola miezaka mandanjalanja izany hatrany ireo mpitoraka bilaogy ao Haiti. Nanoratra ny bilaogy  The Apparent Project  :
Tena mafy dia mafy ireo andro faramparany ireo. Na ahoana na ahoana dia maniry aho mba tsy handroso mihitsy ny alimanaka, satria tsy tena mbola vonona tsara aho hitadidy ny zava-nitranga tamin'ny herintaona. Nisy tovovavy iray nanakana teny an-dalana omaly. Tsy tadidiko mihitsy izy raha tsy nasehony ahy ilay holatra teo amin'ny kitrokeliny. Nisaotra ahy izy satria mbola nanana ny tongony. Tadidiko amin'izay. Izy ilay tovovavy nobatainay sy Jocelyn hiakatra teny amin'ny toerana avo, teny amin'ny faratampony izay efa nandraingiraingy ka notsaboinay teo an-tokotaniko efa ho iray herinandro maninjitra, nodiovinay sy nofonosinay ny ratrany mandra-pahatongan'ny mpamonjy voina.
Mbola maro ireo noeritreretiko, nanontany tena aho hoe manao ahoana izy ireo, ary koa hoe holatra toy inona re no entin”izy ireny manaraka azy e?
Nandany ny androko aho omaly nieritreritra ny zavatra ho ataoko androany. Naheno aho hoe natsangan'izy ireo indray ny tsena izay antsoina hoe Iron ary nisokatra izany omaly. Efa mpandeha matetika eny aho noho ireo ràvako raha niantomboka ilay fandaharana mikasika ny firavaka isan-karazany. Toerana manan-danja amiko io ary nitomany aho raha nahita ilay toeran'ny tsena mahafinaritra sy manan-tantara izay ravarava tamin'ny tany nandritra ilay horohorontany. Mihevitra aho fa ny fahitàna azy io voatsangana indray no fotoana hahafinaritra ahy indrindra. Io ihany ny zavatra voatsangana sy ny zavatra narenina ary namboarina.
Mikasika izay indrindra, nandefa tweets maromaro mikasika ny fanokanana ilay tsena vao namboarina antsoina hoe Iron i @RAMHaiti  :
DRAY!!! Ilay tsena Iron vaovao!! Misaotra betsaka anao ry Denis O'Brien ary #Digicel http://twitpic.com/3p5nau 
Henoko ny anjombon'ny fiarakodian'ny polisy. Nanatrika akaiky ny fanokanana ilay tsena antsoina hoe Iron tao Port au Prince #Haiti  ny filoha Clinton 
…ary ireo tsy fitoviana hita eo amin'ny fahamoran'ny làlana miditra any amin'ireo faritra sasantsasany ao amin'ny renivohitra :
Raha izaho nandeha fiara ho any amin'ny tanànan'i Port au Prince iny. Tsy azoko an-tsaina hoe aiza ho aiza no misy ahy.. #Haiti #EarthQuake [ #Horohorontany] 
Ny tàzana avy ao ambadik'ilay tsena Iron vaovao .. Mbola marobe ireo asa fanarenana tokony hataontsika.. Port au Prince #Haiti #EarthQuake #Horohorontany http://twitpic.com/3p65oy 
Ireo tranolay teo amin'ny tanan-dehibe, Juvenat nalain'ny caribbeanfreephoto, nampiasàna ny Creative Commons Licence.
Ankehitriny, na tamin'ny alalan'ny tweets , na tononkalo  na sosokevitra  mikasika ny fomba atao mba hanadinoina izany, dia tsy am-pisalasalana no ilazàna fa voalohany ao an-tsain'ny mponina ao amin'ny tontolon'ny bilaogy io tsingerintaona mampalahelo io. Mety i Shelley Clay  no mahay mamintina izany indrindra – androany dia zava-dehibe io fahatsiarovana io satria mikasika ny vahoaka Haitiana:
Faha 12 Janoary andoany. Nisy zazakely teraka androany. Eo an-dohalik'ilay reny ny firenena iray androany. Handany ny androko eo am-piandrasana ny vaovao aho ny amin'ny hoe lahy na vavy, mety handeha hidina hijery ilay tsena mahafinaritra antsoina hoe Iron aho, na koa mety hitomany kely, na mety hamihina mafy ny zanako rehetra aho, ka hahatsiaro ny zavatra niseho herintaona lasa. Ho tahian'Andriamanitra anie i Haiti amin'ity taona ity!
Ny sary rehetra hita ato anatin'ity lahatsoratra ity dia nalain'ny caribbeanfreephoto, nahazoan-dalana Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Creative Commons License . Raha hitsidika ny sary mifandimby ao amin'ny kaonty flickr an'ny caribbeanfreephoto dia tsindrio eto .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/02/02/12267/
 Herintaona : http://repeatingislands.com/2011/01/12/january-12-anniversary-of-earthquake-in-haiti/
 ilay horohorontany tao Haiti: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/haiti-earthquake-2010/
 vohikala Haitiana The Livesay : http://livesayhaiti.blogspot.com/2011/01/remembering.html
 bilaogin'i Karlito : http://blog.karljeanjeune.com/2011/01/10/i-remember/
 Mitangorona eo anoloan'ny Lapam-pirenena ny vahoaka #haiti #remember http://yfrog.com/gzzfjmj: http://twitter.com/#!/SophieChavanel/status/25218099368173568
 Mitangorona eny rehetra eny tao amin'ny PAP ny vahoaka mba hankalazàna io tsingerintaona izay mampalahelo io #haiti #remember http://yfrog.com/h5asqevj: http://twitter.com/#!/SophieChavanel/status/25212330769907713
 #herintaona izao…. nisy voina nahatsiravina nandona ny fiainan'ny vahoaka tao #Haiti #remember http://bit.ly/bvYqP8: http://twitter.com/#!/JAMGAL2010/status/25207513603379201
 ho an'ireo izay namoy ny ainy, ho an'ireo izay voadona mafy tamin'izany ka hatramin'izao, ary ho an'ireo izay nanome fanampiana #remember #Haiti: http://twitter.com/#!/chadcat/status/25223876728332288
 ny bilaogy : http://apparentproject.blogspot.com/2011/01/12th.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheApparentProjectBlog+%28The+Apparent+Project+Blog%29
 DRAY!!! Ilay tsena : http://twitter.com/#!/RAMhaiti/status/24913064377720832
 Port au Prince #Haiti: http://twitter.com/#%21/RAMhaiti/status/24921206981398528
 ny filoha Clinton : http://twitter.com/#!/RAMhaiti/status/24921206981398528
 Raha izaho nandeha fiara ho any amin'ny tanànan'i Port au Prince iny. Tsy azoko an-tsaina hoe aiza ho aiza no misy ahy.. #Haiti : http://twitter.com/#!/RAMhaiti/status/24960027374649345
 #EarthQuake [: http://twitter.com/#%21/RAMhaiti/status/24960027374649345
 Ny tàzana avy ao ambadik'ilay tsena : http://twitter.com/#!/RAMhaiti/status/24931588114485248
 nahazoan-dalana Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Creative Commons License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en
 dia tsindrio eto: http://www.flickr.com/photos/georgiap/